China Framming ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Donghua
Acrylic bụ iko iko ọzọ nke nwetaworo ewu ewu dịka ihe eji achọ mma. O siri ike, na-agbanwe agbanwe, na ọ fechaa, ọbụnakwa na-emegharị emegharị. Acryli-panel frames bụ ihe vasatail na ezigbo maka ihe ọ bụla ọnọdụ ibi ndụ n'ihi na ha bụ ndị ukwuu odi mfe na-adịgide adịgide. Ha ga-echekwa foto na okpokolo agba karịa ogologo iko. ha nwere ike ijide ihe niile site na foto gaa na obere ihe osise na ihe ncheta.
Acrylic enwetawo ihe a ma ama karịa iko maka ịkpụ na afọ ndị na-adịbeghị anya nwere ezi ihe kpatara ya.
● Ọ bụ shatterproof na fechaa, dị iche na iko. Njirimara a na - eme ka foto dị mma nke na - arụ ọrụ na ụmụaka na ezinụlọ - ọkachasị ụmụ ọhụrụ. Kwụnye otu osisi na ngalaba acrylic na ebe a na-akwalite akwụkwọ ma ọ bụ ebe a na-egwu egwu dị nchebe karịa iko ọzọ, ebe ọ ga-emerụ onye ọ bụla obi ma ọ daa.
Ọzọkwa, shatterproof na fechaa ọdịdị na-eme ka acrylic ezigbo maka mbupu. Anyị na-akwado omenala acrylic maka ihe ngosi nka ọfụma n'ihi na ọ bụ 1/2 ịdị arọ nke iko ma bụrụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha. Na-eme ka ọ dị mfe ma dị nchebe maka njem na ụgbọ mmiri maka ihe ngosi.
Itis inogide. Ọ gaghị eme ka etiti ahụ kpọọ oge. Yabụ ọ bụ ihe ọkacha mmasị mgbe ị na-ekowe nnukwu ihe osise na nchekwa.
Clear acrylic bụ nhọrọ kachasị maka ngwa ịme ihe kwa ụbọchị. Ọ bụ nke kachasị dị ọnụ ala nke ezinụlọ acrylic, ọ ga-enye gị ihe ntanetị ọkụ 92% maka onyonyo doro anya.